Mamelatra ny fahazavan'i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Aoka hamirapiratra i Kristy
Ny tany Switzerland dia firenena mahafinaritra misy farihy, tendrombohitra ary lohasaha. Indray andro dia feno rakotra zavona ny tendrombohitra izay manitsona lalina mankany amin'ireo lohasaha. Ny firenena dia manana hatsarana manokana amin'izany andro izany, saingy ny hatsarany feno dia tsy ho hita. Amin'ny andro hafa, rehefa nanakatra ny voaly manarona ny vava ny herin'ny masoandro miposaka, dia azo jerena amin'ny hazavana vaovao sy ny fomba fijery hafa ny tontolon'ny masoandro manontolo. Ankehitriny ny tendrombohitra rakotra oram-panala, lohasaha maitso, riandrano misosa sy farihy miloko mena dia azo jerena amin'ny voninahiny rehetra.
Mampahatsiahy ahy ny andalana manaraka ao amin'ny Baiboly izany: «Fa ny dikany dia nohidiana. Mandraka ankehitriny, ity lamba firakotra ity dia mijanona eo ambonin'ilay fanekena taloha rehefa vakiana avy hatrany; tsy ambara satria ravana ao amin’i Kristy. Fa raha miverina amin'ny Tompo izy dia esorina ny valindrihana » (2 Korintiana 3,14:16 sy).
Nampianaran'i Gamaliël "tamin'ny lalàn'ny razantsika" i Paul. Nanazava i Paoly ny fomba fahitany ny tenany momba ny lalàna: "Voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy amin'ny firenen'Isiraely, avy amin'ny firenen'i Benjamina, Hebreo avy amin'ny Hebreo, araka ny lalàna Fariseo, araka ny zotom-po, mpanenjika ny vondron'olona. tsy manan-tsiny taorian'ny fahamarinana notakin'ny lalàna » (Filipiana 3,5-6).
Nanazava tamin'ny Galatianina izy hoe: «Tsy nahazo olona tamin'ity hafatra ity aho ary tsy nampianarina azy tao; tsia, Jesosy Kristy mihitsy no nanambara izany tamiko » (Galatianina 1,12 Fandikan-teny Geneva vaovao).
Ankehitriny, nohazavain'ny Zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty, izay nanala ny fisalobonana an'i Paoly, dia nahita ny lalàna sy ny tontolon'ny Baiboly manontolo tamin'ny hazavana vaovao ary avy amin'ny fomba fijery hafa. Ankehitriny dia nahita izy fa ny fahatsapana ny zanaky ny roa vavy roa, dia i Hagara sy i Sara, ao amin'ny bokin'i Mosesy voalohany, dia misy dikany avo kokoa sy ara-panoharana mba hampisehoana fa nifarana ny fanekena taloha ary natao ny fanekena vaovao. Miresaka momba an'i Jerosalema roa izy. I Hagar dia mijoro ho an'i Jerosalema tamin'ny taonjato faha-1, tanàna iray izay nalain'ny Romana ary teo ambany fitondran'ny lalàna. I Sara kosa dia mifanandrify amin'i Jerosalema any ambony, dia renin'ny fahasoavana izy. Mampitaha ny fahaterahan'i Isaka miaraka amin'ny kristiana izy. Isaka dia zanaky ny fampanantenana, tahaka ny mpino rehetra dia teraka indray. (Galatiana 4,21: 31). Hitany izao fa ny teny fikasana nomena an'i Abrahama dia nolovina tamin'ny finoana an'i Kristy. «Miaraka aminy (Jesosy) Andriamanitra dia nilaza ny eny amin'ny fampanantenany rehetra. Manontany azy ny Amena dia manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Nambaran'Andriamanitra eto amin'ity tany tsy miraikitra ity miaraka aminao: amin'i Kristy » (2 Korintiana 1,20: 21 Vaovao Mahafaly Vaovao). Na eo aza ny fomba fijeriny teo aloha momba ny lalàna dia izao dia hitany fa ny soratra masina (ny lalàna sy ny mpaminany) nanambara fahamarinana avy amin'Andriamanitra, afa-tsy ny lalàna: «Ary ankehitriny, raha tsy manao na inona na inona momba ny lalàna isika, dia hiseho ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, izay nohamafisin'ny lalàna sy ny mpaminany. Fa ny fahamarinana momba ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra no avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay mino » (Romana 3,21-22). Ankehitriny dia nahatakatra ny filazantsara ny vaovao tsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra.
Ny Testamenta Taloha dia tsy ho lany tamingana, fa toa an'i Paoly, isika Kristiana dia tokony hahatakatra sy hanazava izany amin'ny fahazavan'ny Zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty, Jesosy Kristy. Tahaka ny nanoratan'i Paoly hoe: «Fa izay rehetra aseho dia hita mazava ao amin'ny mazava momba ny tena toetrany. Mbola lehibe kokoa: ny zavatra rehetra izay lasa hita dia ampahany amin'ny mazava. Izany no ilazana hoe: mifohaza, ry matory, mitsangàna amin'ny maty! Amin'izay dia hamirapiratra aminao i Kristy » (Efesiana 5,13: 14 fandikana vaovao nataon'i Geneva).
Tena mahafaly anao ny mahita izany fomba fijerin'i Jesosy vaovao izany. Tampoka eo dia manana fomba fijery lehibe kokoa ianao satria hanazava ny zoro miafina ao am-ponao i Jesosy amin'ny maso manazava amin'ny teniny ary matetika amin'ny alalanao koa. Mety ho filamatra na fahasahiranana manokana izany izay mampananosarotra ny fiainana amin'ny mpiara-monina aminao ary tsy manompo an'Andriamanitra mihitsy. Eto, i Jesosy dia afaka manainga ny fisalobonana aminao. Maniry anao hiatrika zava-misy marina amin'ny maso mazava izy ary hanova izay tsy mahita ny fomba fijerinao sy ny fifandraisanao amin'ny hafa sy aminy.
Avelao hamirapiratra aminao i Kristy ary esory ny fisalobonana. Ny fiainanao sy izao tontolo izao dia hiova tanteraka amin'ny fitaratra nataon'i Jesosy noho izay azonao eritreretina.